Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezesekeli - palermo
Thola okuningi ngathi
08:00-13:00 / 15:00-20:00
Ikhaya neFenisha - Izimoto - Izithuthuthu Nezikebhe
"I-Lo Piccolo" Izithuthuthu Nezisekeli - I-Palermo
Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezesekeli - Izambatho zePalermo
4.2 /5 amavoti (amavoti angama-12)
Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi nekomkhulu e-Francesco Paolo Perez, 171 a Palermo shop ekhethekile ekuthengisweni nasekusizeni kwe izingxenye zezithuthuthu, izesekeli nezingubo zokugibela izithuthuthu lemikhiqizo emihle kakhulu. Ukunikezwa okubanzi kwemikhiqizo etholakalayo ukuhlangana nokwanelisa zonke izifiso zabathandi isithuthuthu.
Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezesekeli - Izingxenye zeSithuthuthu uPalermo
Iminyaka engamashumi amathathu Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi, ungumholi ku- izingxenye zesithuthuthu yendawo yePalermo nesifundazwe. Indawo enkulu yokugcina izinto kanye nemikhiqizo emihle kuphela izingxenye zezithuthuthu, benze lo msebenzi waba yindawo yokubhekisela kubo bonke abathanda amasondo amabili. Lo msebenzi wobuchwepheshe, ohlanganiswe nolwazi olukhulu olutholwe emkhakheni wezingxenye zezithuthuthu ngabo bonke abasebenzi, uzokwazi ukuphendula kuzo zonke izicelo zamakhasimende. UMagneti Marelli, uMalossi noFerodo baphakathi kwemikhiqizo edume kakhulu ye izingxenye zesithuthuthu waphathwa.
Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezesekeli - Izesekeli zezithuthuthu
Da Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi, ungathola konke izesekeli zezithuthuthu zohlobo ngalunye lwesithuthuthu. Ama-Windshields, amacala, isembozo sezithuthuthu nabanye abaningi izesekeli, ayatholakala ukuze abe yinhle, anakekele futhi andise ukunethezeka kwayo yonke imikhiqizo ye ngesithuthuthu emakethe. Ukutholakala okukhulu kwesakhiwo sokugcina izinto, ebesilokhu kusihlukanisa Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi a Palermo, ikuvumela ukuthi uhlale uthola izesekeli zezithuthuthu ezifunayo. Futhi uma lokho ikhasimende elikufunayo alikho esitokweni, sithola umkhiqizo ngesikhathi esifushane kakhulu.
Izingxenye zezithuthuthu zikaLo Piccolo nezesekeli - izithuthuthu zokugqoka izithuthuthu Palermo
Ama-helmet, amasudi, amagilavu ​​kanye nama-harnesses kungenye yemikhiqizo ye izembatho zezithuthuthu ukuthengiswa ngu Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi esitolo sakhe Palermo. Ingxenye yezigqoko zokuzivikela izicebile kakhulu ngeziphakamiso, kuphela izinhlobo zomqhele wesigqoko ngentengo ephansi kunazo zonke emakethe. Okunikezwayo okuningi nokuphromotha kuzinikezele ezingutsheni zezithuthuthu futhi uthole amasudi nezinye izesekeli ngo izembatho zezithuthuthu ngamanani entengo yezimali kulula. Vakashela isitolo se Palermo, uzohlala uthola izindaba zakamuva mayelana izingubo amasondo amabili.
Izingxenye zomzimba nezeLouccolo ngesithuthuthu nezinye izinto ezisetshenziswayo - Izithuthuthu nezinsimbi zemikhiqizo yezithuthuthu ePalermo
Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi iqinisekisa ukunikezwa okungcono kakhulu nokukhethwa kwemikhiqizo ehamba phambili emakethe izingxenye zezithuthuthu, izingubo nezinye izinsimbi. Ikhathalogi ligcwele iziphakamiso kanye nokunikezwa okubandakanya phakathi kweminye imikhiqizo yeGiannelli, Arrow, Leovince, Performance ephezulu, Malossi, Polini, Newfren, Didi, Ognibene, Ferodo, Magneti Marelli, Okyami, Yuasa, Piaggio Airoh, uMomo Design , UCaberg, uBell, uTucano Urbano. Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi iqinisekisa ukuthi konke izingxenye ezisele, i izesekeli futhi iizingubo lemikhiqizo ethengisiwe ingeyangempela futhi iqinisekisiwe. Ikhathalogi ka Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi ivuselelwa njalo futhi esitolo kungenzeka ukuthi ithenge zonke izindaba ezimakethwa yimakethe ngokuya ngamasondo amabili.
Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi isitolo esiholayo a Palermo ngoba i izingxenye zesithuthuthu, i izesekeli futhi iizingubo. Sekuyiminyaka engamashumi amathathu, bethengisa kuphela izinhlobo ezihamba phambili, okuqinisekiswa ngohlobo olubanzi kanye nekhwalithi yezindlu ezinkulu ku izingxenye ezisele. Noma ngabe uluhlobo luni lomkhiqizo lwakho ngesithuthuthu, Izingxenye zezithuthuthu zika-Lo Piccolo nezinye izinsimbi uzokwanelisa zonke izicelo zakho.
Ikheli: I-Via Francesco Paolo Perez, 171
I-POSTAL CODE: 90127
Ucingo: 0916 168638
Yefeksi: 0916 160492
Inombolo ye-VAT: 06598050828
4 izinyanga edlule
Lawa mazwana ancishiswe umongameli esizeni
Ngokuyinhloko bangabantu abakhohlisayo, bathumela izimpahla ezinamaphutha ngisho nase-Amazon, ngesikhathi sokubuya uma bezithumele emuva ngezindleko zekhasimende, bethembisa ukubuyiselwa imali ngokudluliselwa kwebhange.
Ngeke baphinde baxhumane nawe, iphakheji ...
Ngeke baphinde bakuthinte, iphakethe lizonyamalala futhi manje ngemuva kwenyanga yize ngikhethe futhi ngakhokhela isaziso sokulethwa angazi ukuthi iphakethe lami likuphi.
Hlala kude nabo, ku-inthanethi naku-inthanethi.
Abakwa-Scammers, hlala kude, abanazo izindlela zokuthengisa ezithutha, ngisho nge-amazon bayakwazi ukukukhwabanisa.
NGI-ILSINIOR LEVANTINO ROSARIO ISITOLO SEPOLINI SISEKELWE I-KYMCO MOVIE ENGINE NGESIKHATHI SE-CODE 125 SEBELWA
Layisha Amazwana amaningi